नोबेल शान्ती पुरस्कार विजेता मलाला विवाह बन्धनमा, को हुन उनका पति ? - Vishwanews.com
नोबेल शान्ती पुरस्कार विजेता मलाला विवाह बन्धनमा, को हुन उनका पति ?
बर्मिंघम । नोबेल शान्ती पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफज़ई विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छिन् । उनी स्वयमःले ट्वीट गर्दै यसबारे जानकारी गराएकी हुन् । बेलायतको बर्मिंघम शहरमा उनको विवाह भएको हो । यो उनको पतिको घर हो । २४ वर्षिय मलालाले असर मलिकसँग मुस्लिम परम्परा अनुसार विवाह गरेकी हुन् । निकाह भनिने यो सत्कारपछि उनले यो दिन आफ्नो जीवनको एक मूल्यवान दिन भएको बताइन् ।
मलाला पाकिस्तानमा महिला अधिकारका लागि संघर्ष गरेकी युवति हुन् । उनलाई सोही आरोपमा २०१२ मा तालिवान चरमपन्थीले टाउकोमा गोली हानेका थिए । त्यसपछि उनलाई उपचारका लागि बर्मिंघम लगिएको थियो । उपचार पछि पनि उनी उतै बस्न लागिन् । उनको विवाह विशुद्ध पारिवारिक मात्र भएको छ ।
मलालालाई उनका लाखौं प्रसशकले बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । मलालाका पति पाकिस्तानी क्रिकेटसँग जोडिएका छन् । असर मलिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डको नेशनल हाई परर्मेन्स सेन्टरमा जनरल म्यानेजर (जीएम) पदमा काम गर्छन् । पीसीबीमा आवद्ध हुनु अघि उनी पाकिस्तान सुपर लीगको टीम मुल्तान सुल्तान्ससँग समेत काम गरेका थिए ।